ချက္ကရီမင်းဆက် - ဝီကီပီးဒီးယား
ချက္ကရီမင်းဆက် (မြန်မာ: စကြီ ရာဇဝံသ; သင်္သကရိုက်: Cakrī Rājavaṁsa) သည် ထိုင်းဘုရင့်နိုင်ငံ၏ လက်ရှိမင်းဆက်ဖြစ်ကာ အကြီးအကဲဘုရင်မှာ နိုင်ငံတော်၏ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်။တက်ဆင်နှင့် သွန်ဘူရီ​ခေတ်များအလွန် ၁၇၈၂ခုနစ်တွင် မြို့​တော်ကို ဘန်​ကောက်သို့ ​ပြောင်းပြီး​ချိန် ရတ်တနာကိုစင်​ခေတ် မှစ၍ ထိုင်းနိုင်ငံကို အုပ်စိုးခဲ့သည်။ဤမင်းဆက်ကို တရုတ်-မွန်နွယ်ဖွားဖြစ်​သော အယုဒ္ဓယစစ်တပ်​ခေါင်း​ဆောင်ဖြစ်သူ ပတ်တရော့ဖာ ချူလာလော့က တည်​ထောင်ခဲ့သည်။
၁၇၈၂; ၂၃၇ နှစ် အကြာက (၁၇၈၂)
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ဘုရင် (၁၉၄၈-လက်ရှိ)
လက်ရှိအကြီးအကဲဖြစ်သူမှာ ၁၀ဆက်​မြောက်ဘုရင်ဖြစ်​သော ဝဇိရာလင်္ကရဏဖြစ်သည်။မင်းဆက်၏ လက်ရှိ​နေရာမှာ ဘန်​​ကောက်မြို့ရှိ တော်ဝင်နန်းတော်ဖြစ်သည်။
မင်းသား မဟီတလ အတုလျေတေဇနင့် မိဖုရား သီရိနဂရိန္ဒြာ
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ လက်ရှိ​တော်ဝင်မိသားစုမှာ မဟီတလ အတုလျေတေဇမင်းသားမှ ဆင်းသက်လာသည်။သူသည် စုဠာလင်္ကရဏဘုရင်၏သား​တော်ဖြစ်ကာ ဝဇိရာဝုဓဘုရင်နှင့် ပြဇာဓိပကဘုရင်တို့ အ​ဖေတူအ​မေကွဲ ညီအစ်ကိုလည်းဖြစ်သည်။မဟီတလ အတုလျေတေဇ၏သား​တော်ကြီး အာနန္ဒ မဟီတလနတ်ရွာစံပြီး​နောက် သား​တော်ငယ် ဘူမိဗလအတုလျတေဇနန်းတက်ခဲ့သည်။သူ့အား သား​တော် ဝဇိရာလင်္ကရဏဆက်ခံခဲ့သည်။
​တော်ဝင်မိသားစု၏ လက်ရှိမိသားစုဝင်များမှာ ​​အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
ဝဇိရကိတိယာဘာ (အကြီးဆုံး သမီး​တော်)
သီရိဝဏ္ဏဝရီ နာရီရတန (သမီး​တော်ငယ်)
ဒီပင်္ကရ ရံသိဇောတိ (အငယ်ဆုံးသား​တော်)
သိရိဘာစုဍာဘရဏ (ဘုရင့်တူမ​တော်၊စုဠာဘရဏမင်းသမီး၏ သမီး)
အဒိတျာဒရကိတိဂုဏ (ဘုရင့်တူမ​တော်၊စုဠာဘရဏမင်းသမီး၏ သမီး)
ဥပ္ပလရတနာ (ဘုရင့် အစ်မ​တော်)
စုံသဝလီ (ဘုရင့် ယခင်မိဖုရား၊ဝဇိရကိတိယာဘာ၏ မယ်​တော်)
ပလွိုင်းပိုင်လင် ဂျန်ဆန် (ဘုရင့်တူမ​တော်၊ဥပ္ပလရတနာ၏ သမီး)
သိရိကိတိယာ ဂျန်ဆန် (ဘုရင့်တူမ​တော်၊ဥပ္ပလရတနာ၏ သမီး)
ဒသနာဝလယ သရသင်္ဂြါမ (ဘုရင့် ဝမ်းကွဲအစ်မ)
မကြာမီက လွန်​လေပြီး​သော မိသားစုဝင်များပြင်ဆင်
ဝဇိရရတန (ဘုရင်ဘူမိ​ဗလ၏ ဝမ်းကွဲ၊ဗာဂျီရာဗုဘုရင်၏ တစ်ဦးတည်း​သောသမီး) (၂၀၁၁)
ကလျာဏိ ဝဎနာ (ဘုရင်ဘူမိ​ဗလ၏ အစ်မ​တော်) (၂၀၀၈)
ပွန်းဂျန်ဆန် (ဥပ္ပလရတနာ၏ သား​တော်) (၂၀၀၄)
သီရိနဂရိန္ဒြာ (ရာမ၈နှင့် ရာမ၉ တို့၏မယ်​တော်) (၁၉၉၅)
နန်း​မွေနန်းလျာ ဆက်ခံမှု ဇယားပြင်ဆင်
ဗုဒ္ဓ ယော့ဖာ စုဠာလောက (ရာမ၁) (၁၇၃၇–၁၈၀၉)
ဗုဒ္ဓ လော့လာ နဘာလယ (ရာမ၂) (၁၇၆၇–၁၈၂၄)(ရာမ၁၏သား​တော်)
နန်းကလော (ရာမ၃) (၁၇၈၈–၁၈၅၁)(ရာမ၂၏သား​တော်)
မကုဋ (ရာမ၄) (၁၈၀၄–၁၈၆၈)(ရာမ၂၏သား​တော်)
စုဠာလင်္ကရဏ (ရာမ၅) (၁၈၅၃–၁၉၁၀)(ရာမ၄၏သား​တော်)
ဝဇိရာဝုဓ (ရာမ၆) (၁၈၈၁–၁၉၂၅)(ရာမ၅၏သား​တော်)
ပြဇာဓိပက (ရာမ၇) (၁၈၉၃–၁၉၄၁)(ရာမ၅၏သား​တော်)
အာနန္ဒာ မဟီတလ (ဆုန်ခလာမင်းသား) (၁၈၉၂–၁၉၂၉)(ရာမ၅၏သား​တော်)
အာနန္ဒ မဟိတလ (ရာမ၈) (၁၉၂၅–၁၉၄၆)(ဆုန်ခလာမင်းသား၏သား​တော်)
ဘူမိဗလအတုလျတေဇ (ရာမ၉) (၁၉၂၇–၂၀၁၆)(ဆုန်ခလာမင်းသား၏သား​တော်)
ဝဇိရာလင်္ကရဏ (ရာမ၁၀) (၁၉၅၂-)(ရာမ၉၏သား​တော်)
(၁) ဒီပင်္ကရ ရံသိဇောတိမင်းသား (၂၀၀၅-)(ရာမ၁၀၏သား​တော်)
(၂) ဝဇိရကိတိယာဘာ (၁၉၇၈-)
(၃) သီရိဝဏ္ဏဝရီ နာရီရတန (၁၉၈၇-)
(၄) သိရိန္ဓရမင်းသမီး (၁၉၅၅-)
(၅) စုဠာဘရဏမင်းသမီး (၁၉၅၇-)
(၆) သိရိဘာစုဍာဘရဏ (၁၉၈၂-)
(၇) အဒိတျာဒရကိတိဂုဏ (၁၉၈၄-)
ဥပ္ပလရတနာ ရာဇာကညာမင်းသမီးသည် ဘုရင်ဘူမိ​ဗလ၏ သမီးကြီးဖြစ်​သော်လည်း ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် အ​မေရိကန်နိုင်ငံသားနှင့် လက်ထပ်အပြီး သူ၏ နန်း​မွေနန်းလျာနှင့် ​တော်ဝင်ဂုဏ်ပုဒ်များကို စွန့်လွှတ်ခဲ့သည်။
စုဍာဝဇရ ဝိဝဇရဝံသ၊ ဝဇိရရေသ ဝိဝဇရဝံသ၊ စကြီဝဇိရ ဝိဝဇရဝံသ၊ ဝဇရဝီရ ဝိဝဇရဝံသ င်းသားများသည် ဝဇိရာလင်္ကရဏဘုရင်၏ သား​တော်များဖြစ်​သော်လည်း ဝဇိရာလင်္ကရဏက သုစာရိဏီ ဝိဝဇရဝံသမိဖုရားနှင့်အတူ ၎င်းတို့ကိုပါ စွန့်ပစ်လိုက်သည်။
ဗုဒ္ဓ ယော့ဖာ စုဠာလောက
(ရာမ၁) ၂၀ မတ် ၁၇၃၇
အယုဒ္ဓယမြို့၊ အယုဒ္ဓယတိုင်းပြည် ၆ ဧပြီ ၁၇၈၂ ၇ စက်တင်ဘာ ၁၈၀၉
တော်ဝင်နန်း​တော်၊ ဘန်​ကောက်မြို့၊ ဆိုင်ယမ်တိုင်းပြည်
သက်​တော် ၇၂ အမရိန္ဒြာ
နှင့်အခြားမိဖုရား ၃၁ပါး သား​တော်၁၇၊ သမီး​တော် ၂၅
(ရာမ၂) ၂၄ ​ဖေ​ဖော်ဝါရီ ၁၇၆၇
အမ်ဖဝါး၊ အယုဒ္ဓယတိုင်းပြည် ၇ စက်တင်ဘာ ၁၈၀၉ ၂၁ ဇူလိုင် ၁၈၂၄
(ရာမ၃) ၃၁ မတ် ၁၇၈၈
သွန်ဘူရီနန်း​တော်၊ ဘန်​ကောက်မြို့၊ ဆိုင်ယမ်တိုင်းပြည် ၂၁ ဇူလိုင်၁၈၂၄ ၂ ဧပြီ ၁၈၅၁
သက်​တော် ၆၃ မိဖုရား၄၂ပါး သား​တော်၂၂၊ သမီး​တော်၂၉
(ရာမ၄) ၁၈ ​အောက်တိုဘာ ၁၈၀၄
သွန်ဘူရီနန်း​တော်၊ ဘန်​ကောက်မြို့၊ ဆိုင်ယမ်တိုင်းပြည် ၂ ဧပြီ ၁၈၅၁ ၁ ​အောက်တိုဘာ ၁၈၆၈
​တော်ဝင်နန်း​တော်၊ ဘန်​ကောက်မြို့၊ ဆိုင်ယမ်တိုင်းပြည်
(ရာမ၅) ၂၀ စက်တင်ဘာ ၁၈၅၃
​တော်ဝင်နန်း​တော်၊ ဘန်​ကောက်မြို့၊ ဆိုင်ယမ်တိုင်းပြည် ၁ ​အောက်တိုဘာ ၁၈၆၈ ၂၃ ​အောက်တိုဘာ ၁၉၁၀
ဒူ​ဆစ်နန်း​တော်၊ ဘန်​ကောက်မြို့၊ ဆိုင်ယမ်တိုင်းပြည်
သား​တော် ၃၂၊ သမီး​တော်၄၄
(ရာမ၆) ၁ ဇန်နဝါရီ ၁၈၈၁
​တော်ဝင်နန်း​တော်၊ ဘန်​ကောက်မြို့၊ ဆိုင်ယမ်တိုင်းပြည် ၂၃ ​အောက်တိုဘာ ၁၉၁၀ ၂၆ နိုဝင်ဘာ ၁၉၂၅
​တော်ဝင်နန်း​တော်၊ ဘန်​​ကောက်မြို့၊ ဆိုင်ယမ်တိုင်းပြည်
(ရာမ၇) ၈ နိုဝင်ဘာ ၁၈၉၃
​တော်ဝင်နန်း​တော်၊ ဘန်​ကောက်မြို့၊ ဆိုင်ယမ်တိုင်းပြည် ၂၆ နိုဝင်ဘာ ၁၉၂၅ ၂ မတ် ၁၉၃၅ ၃၀ ​မေ ၁၉၄၁1
သက်​တော် ၄၇ ရမ်ဘိုင် ဘာနီ -
(ရာမ၈) ၂၀ စက်တင်ဘာ ၁၉၂၅
ဟိုင်ဒါဘတ် ၊ ဘာဒန်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဝါမန် ၂ မတ် ၁၉၃၅
၁၉၃၅မှ ၁၉၄၆အထိ ဘုရင်ခံ​ကောင်စီဖြင့်သာ အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ၉ ဇွန် ၁၉၄၆
သက်​တော် ၂၀ - -
(ရာမ၉) ၅ ဒီဇင်ဘာ ၁၉၂၇
အာဘန်​တောင် ​ဆေးရုံ၊ ကမ်းဘ​ရေ့ချ်၊ မက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၉ ဇွန် ၁၉၄၆
(၁၉၅၀ ​မေလ ၅ရက်တွင် ဘိသိက်သွန်း) ၁၃ ​အောက်တိုဘာ ၂၀၁၆
သက်​တော် ၈၈နှစ် သီရိခေတ်
(ရာမ၁၀) ၂၈ ဇူလိုင် ၁၉၅၂
အမ်ပွန်း စသမ် အိမ်တော် ၊ ဒူဆစ်နန်းတော်၊ ဘန်​ကောက်မြို့၊ ထိုင်းနိုင်ငံ ၁၃ ​အောက်တိုဘာ ၂၀၁၆(၂၀၁၉ ​မေလတွင် ဘိသိက်သွန်းမည်) လက်ရှိ -
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - အရှေ့နန်းတော်
ဥပရာဇာသည် ဆိုင်ယမ်တိုင်းပြည်၏ ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ထို​နေရာကို အဆင့်အမြင့်ဆုံးမင်းသားကို ​ပေး​လေ့ရှိသည်။ဥပမာ- ဘုရင်၏ညီငယ် (သို့မဟုတ်) သား​တော်ကြီးများဖြစ်သည်။၁၈၈၅ခုနှစ်မတိုင်မီအထိ ချက္ကရီမင်းဆက်မှန်သမျှသည် ဥပရာဇာခန့်​လေ့ရှိသည်။ဥပရာဇာသည် အရှေ့နန်းတော်တွင် ရုံးစိုက်​လေ့ရှိသည်။ထိုင်းအစဉ်အလာအရ ဥပရာဇာသည် နန်းတက်ရန် လျာထားသတ်မှတ်ခံရ​သော်လည်း အစာရစန်ဒုံမင်းသားသာလျှင် ဗုဒ္ဓ လော့လာ နဘာလယဘုရင်အဖြစ် နန်းတက်နိုင်ခဲ့သည်။စုဠာလင်္ကရဏဘုရင်လက်ထက်တွင် သူ၏ဝမ်းကွဲ၊ဥပရာဇာဖြစ်​သော ဝိဇယဇည​ကွယ်လွန်ပြီး​နောက် ဥပရာဇာ​နေရာကို ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။ထို့​နောက် သူ၏သားအကြီးဆုံးကို အိမ်​ရှေ့မင်း ခန့်အပ်ခဲ့သည်။သို့​သော် ဥပရာဇာမဟုတ်​ပေ။ 
မဟာသုရသိင်္ဟနာဒ ၁ နိုဝင်ဘာ ၁၇၄၄
အယုဒ္ဓယမြို့၊ အယုဒ္ဓယတိုင်းပြည် ၁၇၈၂ ၃ နိုဝင်ဘာ ၁၈၀၃
သက်​တော်၅၉ ၄၃​ယောက် ရာမ၁
အစာရစန်ဒုံ ၂၄ ​ဖေ​ဖော်ဝါရီ ၁၇၆၇
အယုဒ္ဓယတိုင်းပြည် ၁၈၀၆ ၇ စက်တင်ဘာ ၁၈၀၉
(ရာမ၂အဖြစ်နန်းတက်ခဲ့) ၇၃​ယောက် ရာမ၁
မဟာသေနာနုရက္ခ ၂၉ မတ် ၁၇၇၃
အယုဒ္ဓယတိုင်းပြည် ၇ စက်တင်ဘာ ၁၈၀၉ ၁၆ ဇူလိုင် ၁၈၁၇
သက်​တော်၄၅ ၄၀​ယောက် ရာမ၂
ဆတ်ဒီဖိုလဆပ် ၂၁ ​အောက်တိုဘာ ၁၇၈၅
အယုဒ္ဓယတိုင်းပြည် ၂၁ ဇူလိုင် ၁၈၂၄ ၁ ​မေ ၁၈၃၂
သက်​တော်၄၆ ၂၀ ရာမ၃
ပင်ကလို ၄ စက်တင်ဘာ ၁၈၀၈
သွန်ဘူရီနန်း​တော်၊ ဆိုင်ယမ်တိုင်းပြည် ၂၅ ​မေ ၁၈၅၁ ၇ ဇန်နဝါရီ ၁၈၆၆
သက်​တော်၅၇ ၅၈​ယောက် ရာမ၄
ဝိဇယဇည ၆ ဧပြီ ၁၈၃၈
သွန်ဘူရီနန်း​တော်၊ ဆိုင်ယမ်တိုင်းပြည် ၂ ​အောက်တိုဘာ ၁၈၆၈ ၂၈ ဩဂုတ် ၁၈၈၅
အ​ရှေ့နန်း​တော်၊ ဘန်​ကောက်မြို့၊ ဆိုင်ယမ်တိုင်းပြည်
(ကွယ်လွန်ပြီး​နောက် ရာထူးဖျက်သိမ်း) ၂၈​ယောက် ရာမ၅
အ​နောက်နန်း​တော်ဆိုသည်မှာ အယုဒ္ဓယ​ခေတ်မှ ဆက်၍လာ​သော ​နေရာဖြစ်သည်။သို့​သော် ချက္ကရီမင်းဆက် စတင်တည်​ထောင်ချိန်မှစ၍ အ​နောက်နန်း​တော်ကို တစ်ဦးသာစိုးစံခဲ့သည်။အနုရတ် ဒီဗေ့ချ်မင်းသားသည် ရာမ၁ဘုရင်၏ ဝမ်းကွဲဖြစ်ကာ ၁၇၈၅တွင် ခန့်အပ်ခံခဲ့ရသည်။
အနုရတ် ဒီဗေ့ချ် ၂၈ မတ် ၁၇၄၆ ၁၇၈၅ ၂၀ ဒီဇင်ဘာ ၁၈၀၆
(​နေရာရပ်စဲ) ၃၅​ယောက် ရာမ၁
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အိမ်ရှေ့မင်း
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အိမ်ရှေ့မင်း သို့မဟုတ် Sayam မကုဋရာဇကုမာရ (สยามมกุฎราชกุมาร)သည် တိုင်းပြည်၏ အနာဂတ်ဘုရင်အဖြစ် သတ်မှတ်ထား​သော​နေရာဖြစ်သည်။၁၈၈၆ခုနှစ်တွင် စုဠာလင်္ကရဏဘုရင်သည် သူ၏အကြီးဆုံးသားကို ခန့်အပ်ခြင်းဖြင့် ရာထူးစတင်ဖန်တီးခဲ့သည်။ဤ​နေရာသည် အ​နောက်နိုင်ငံများ၏ဓ​လေ့မှ တိုက်ရိုက်ကူးချထားခြင်းဖြစ်သည်။ထိုစဉ်မှစ၍ အိမ်​ရှေ့မင်းသား၃​ယောက်သာ ခန့်အပ်ခဲ့သည်။​နောက်ဆုံး​သော အိမ်​ရှေ့မင်းသားမှာ လက်ရှိဘုရင် မဟာဝဇိရာလင်္ကရဏဖြစ်သည်။သူ့ကို ၁၉၇၂ခုနှစ်တွင် ခမည်း​တော် ဘုရင်ဘူမိ​ဗလအတုလျတေဇခန့်အပ်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၆ခုနှစ်တွင် ဘုရင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
မဟာဝဇိရုဏဟိသ ၂၇ ဇွန် ၁၈၇၉
​တော်ဝင်နန်း​တော်၊ ဘန်​ကောက်မြို့၊ ဆိုင်ယမ်တိုင်းပြည် ၁၄ ဇန်နဝါရီ ၁၈၈၆ ၄ ဇန်နဝါရီ ၁၈၉၅ အသက်၁၆နှစ်အရွယ်တွင် တိုက်ဖိုက်​ရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန် ရာမ၅ဘုရင်နှင့် မိဖုရားဆာဗန် ဗဟာနာ
ဝဇိရာဝုဓ ၁ ဇန်နဝါရီ ၁၈၈၁
၄ ဇန်နဝါရီ ၁၈၉၅ ၂၃ ​အောက်တိုဘာ ၁၉၁၀ ခမည်း​တော်နတ်ရွာစံအပြီး ရာမ၆အဖြစ်နန်းတက်ခဲ့ ရာမ၅ဘုရင်နှင့် မိဖုရားစစ်ဗာပါ ပေါင်ဆရီ
မဟာဝဇိရာလင်္ကရဏ ၂၈ ဇူလိုင် ၁၉၅၂
အမ်ပွန်း စသမ် အိမ်တော် ၊ ဒူဆစ်နန်းတော်၊ ဘန်​ကောက်မြို့၊ ထိုင်းနိုင်ငံ
၂၈ ဒီဇင်ဘာ ၁၉၇၂ ၁၃ ​အောက်တိုဘာ ၂၀၁၆ ခမည်း​တော်နတ်ရွာစံအပြီး ရာမ၁၀အဖြစ် နန်းတက်ခဲ့ ရာမ၉ဘုရင်နှင့် မိဖုရားသီရိ​ခေတ်
အခြားကြည့်ရန်။ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ မိဖုရားခေါင်များ
အမရိန္ဒြာ ၁၅ မတ် ၁၇၃၇
အယုဒ္ဓယတိုင်းပြည် ၁၇၆၀ ခန့်က ၆ ဧပြီ ၁၇၈၂
ဘုရင်၏ဘိသိက်ပွဲနှင့်အတူ ၇ စက်တင်ဘာ ၁၈၀၉
ဘုရင်၏​သေဆုံးခြင်းနှင့်အတူ ၂၅ ​မေ ၁၈၂၆
သက်​တော်၈၉ ၁၀​ယောက် ရာမ၁
အယုဒ္ဓယတိုင်းပြည် ၂၁ စက်တင်ဘာ ၁၈၀၁ ၇ စက်တင်ဘာ ၁၈၀၉
ဘုရင်၏ဘိသိက်ပွဲနှင့်အတူ ၂၁ ဇူလိုင် ၁၈၂၄
ဘုရင်၏​သေဆုံးခြင်းနှင့်အတူ ၁၈ ​အောက်တိုဘာ ၁၈၃၆
သက်​တော်၆၉ ၅​ယောက် ရာမ၂
ဒေဝသိရိန္ဒြာ ၁၇ ဇူလိုင် ၁၈၃၄
ဘန်​ကောက်မြို့၊ ဆိုင်ယမ်တိုင်းပြည် ၁ ဧပြီ ၁၈၅၁ ၉ စက်တင်ဘာ ၁၈၆၂
သက်​တော်၂၈ ​၄ယောက် ရာမ၄
(ဘုရင်ခံမိဖုရား) ၁ ဇန်နဝါရီ ၁၈၆၄
​တော်ဝင်နန်း​တော်၊ ဘန်​ကောက်မြို့၊ ဆိုင်ယမ်တိုင်းပြည် ၁၈၇၈ခန့်က ၂၃ ​အောက်တိုဘာ ၁၉၁၀
ဘုရင်၏​သေဆုံးခြင်းနှင့်အတူ ၂၀ ​အောက်တိုဘာ ၁၉၁၉
သက်​တော်၅၆ ၉​ယောက် ရာမ၅
ဣန္ဒြသတ္တိဆာချီ ၁၀ ဇွန် ၁၉၀၂
ဘန်​ကောက်မြို့၊ ဆိုင်ယမ်တိုင်းပြည် ၁၀ ဇွန် ၁၉၂၁ ၁ ဇန်နဝါရီ ၁၉၂၂
ခန့်အပ်ခြင်း ၁၅ နိုဝင်ဘာ ၁၉၂၅
မိဖုရားအဖြစ် တိုးမြှင့်ခံရ ၃၀ နိုဝင်ဘာ ၁၉၇၅
သက်​တော်၇၃ - ရာမ၆
ရမ်ဘိုင် ဘာနီ ၂၀ ဒီဇင်ဘာ ၁၉၀၄
ဘန်​ကောက်မြို့၊ ဆိုင်ယမ်တိုင်းပြည် ၂၅ ဩဂုတ် ၁၉၁၈ ၂၅ နိုဝင်ဘာ ၁၉၂၅
ဘုရင်၏ဘိသိက်ပွဲနှင့်အတူ ၂ မတ် ၁၉၃၅
ဘုရင်၏ ပြုတ်ကျခြင်းနှင့်အတူ ၂၂​ ​မေ ၁၉၈၄
သက်​တော်၇၉ - ရာမ၇
သီရိခေတ်(ဘုရင်ခံမိဖုရား) ၁၂ ဩဂုတ် ၁၉၃၂
ဘန်​ကောက်မြို့၊ ဆိုင်ယမ်တိုင်းပြည် ၂၈ ဧပြီ ၁၉၅၀ ၁၃ ​အောက်တိုဘာ ၂၀၁၆
ဘုရင်၏​သေဆုံးခြင်းနှင့်အတူ ၄​ယောက် ရာမ၉
ဥပရာဇာမှာ လက်ရှိနန်းဆက်၏ ဒုတိယဘုရင်သ​ဘောဖြစ်ကာ အိမ်​ရှေ့မင်းမှာ ​နောင်တွင်ဘုရင်ဖြစ်မည့် မင်း​လောင်းဖြစ်သည်။
↑ Terwiel, B.J. (2011). Thailand's Political History: From the 13th Century to Recent Times. Thailand: River Books. ISBN 9749863968။
↑ ​တော်ဝင်ထိုင်းပြန်တမ်း Announcement of the appointment of Prince Vajirunhis to the Crown Prince of Siam (Thai), Volume 3, Chapter 44, 1 March 1886, page 368
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ချက္ကရီမင်းဆက်&oldid=454776" မှ ရယူရန်
၂၄ မတ် ၂၀၁၉၊ ၀၅:၂၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။